Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Bọtịnụ Alert Smart Medical Ọhụrụ na Ahịa
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke ndị na-atụgharị afọ 65 taa ga-achọ ụdị nkwado na ọrụ nlekọta ogologo oge n'ime afọ ha fọdụrụnụ. N'iburu nọmba a n'uche, inye ndị ha hụrụ n'anya nnwere onwe na ọnụ ahịa ọnụ ahịa bụ ihe MOBI rụzuru na Sistemụ Nlebaanya Nkwado ọhụrụ ha.
MOBI Teknụzụ Inc., akara ahụike ndị ahịa US na akara eletrọnịkị ụlọ, kpughere sistemu nlekota nkwado MOBI Caregiver ọhụrụ ha dị ugbu a site na getmobi.com na Walmart.com. Emepụtara iji kwado ịka nká na ebe obibi onwe ya, ngwaọrụ njikere ahụike MOBI bụ ọkaibe ma dị mfe iji. Site na nleba anya n'efu na mpaghara na nhọrọ 24/7 ọkachamara ọkachamara, ndị na-elekọta ndị agadi ma ọ bụ ndị nwere nkwarụ nwere ike iku ume dị mfe ịmara na ndị ha hụrụ n'anya nwere enyemaka n'aka.
Ejiri usoro ikuku kọmpat mepụta, enwere ike iburu Sistemụ Nlebaanya Nkwado MOBI dị ka olu Alert ahụike ma ọ bụ tinye ya n'elu ọ bụla. Iji otu pịa bọtịnụ enyemaka dị mfe iji, a na-agwa ndị nlekọta nọ nso ma ọ bụ ndị dị anya ozugbo site na ngwa MOBI. Site n'ebe ahụ, ndị nlekọta nwere ike ikpebi usoro nlekọta na-esote n'ụzọ dị mfe. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye ọkachamara na-akwado nwere ike izipu ọrụ mberede ozugbo.
Atụmatụ na uru sistemụ nkwado MOBI gụnyere:
• Bọtịnụ enyemaka dị mfe ịtọlite ​​na ọdụ Wi-Fi Smart
• Na-akwado ndị chọrọ ịka nká na ebe ma ọ bụ nwee nnwere onwe karịa
• Nhazi ikuku kọmpat nke na-enye ohere iyi, ibu, ma ọ bụ ịrịgo n'ụzọ dị mfe
• A na-eziga ọkwa ọkwa smart site na ngwaọrụ dijitalụ echekwara gaa na kọntaktị edepụtara site na MOBI Smart App mgbe ịpịrị bọtịnụ enyemaka.
• Nleba anya mpaghara efu n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu na ọtụtụ ndị nlekọta/otu ezinụlọ
• Nhọrọ 24/7 ọkachamara nlekota oru na ọnụ ala kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ price.
• Nhọrọ ịgbasawanye maka nleba anya smart n'ime ụlọ zuru oke
Sistemụ Nlebanya Nkwado MOBI bụ akụkụ nke mkpokọta ịdịmma ụlọ nke MOBI maka ndị agadi. Tinyere ngwaahịa ndị dị ka ihe nleba anya ọbara mgbali elu MOBI, oximeter pulse oximeter, na temometa dijitalụ na-abụghị kọntaktị, ndị agadi nwere ike idowe ahụike na nnwere onwe ha. MOBI bu n'obi ibelata ibu na nchekasị nke ilekọta ndị a hụrụ n'anya bụ ndị na-ebi onwe ha n'ụlọ. Ngwa MOBI Smart na-enye ohere maka sistemụ nlebanya smart sara mbara yana mgbịrịgba vidiyo MOBI, igwefoto, sensọ na ọtụtụ bọtịnụ iji nye ndị na-elekọta ya udo nke uche.
Sistemụ nleba anya nkwado nke MOBI na-aga n'ihu karịa ngwaahịa ndị yiri ya na-enye site n'ikwe ka ndị nlekọta nweta akụkọ ihe mere eme nke ọkwa, mmelite na ozi dị oke mkpa dị ka ọgwụ, allergies, ọnọdụ ahụike na ndị dọkịta. A na-edobe ozi ndị a niile dị mkpa nke ọma n'otu ebe echekwara dị mfe ịnweta. Site na ozi a dị n'aka, kọntaktsị ahọpụtara nwere ike chọta ihe niile ha chọrọ ngwa ngwa mgbe mkpughe mere.